ကောင်းကင်ဖြူ: April 2012
Posted by မောင်ဘုန်း at 10:24 PM 11 comments
တပြည်စီ က လွမ်း ပုံကို
နှိုးထ လေ ရော့ … သည်မိုး ရယ် …..
အကြောင်း ရှာလို့…. မဖြေ သာ
နေပူ လည်းလွမ်း …..
မိုးရွာ လည်းလွမ်း ….
အိုး ….. လွမ်းရတဲ့ သည် အဖြစ်
ကုသိုလ်ကံ ရှိလေ သမျှ
အတွေးနဲ့ သာ ဖြေရ .... ရှာပြီ ... ။
တပြည်စီ မျှော်လွမ်း လေ … တော့
မှုန်ပြာပြာ တိမ်ယံ ကြားမှာ
ထင်ယောင်ကာ တစ်မိုးအောက် … ပေါ့
လေ အဟုန် မှ …… မယ့် အသံ
ရစ်ဖုံးကာ ကြားပြန် ….. လေ တော့
စောင့်စားလို့ပေါ်လာနိုး
မျှော်ကာ တမ်းလို့.... ဆို မိတယ်
ဆုံ တစ်ခါ ...... ပြေးခဲ့ …. ပါတော့ ….
မြတ်နိုးသူ ….. ရယ် ….. ။
ဖြေရှာလို့လွမ်းရယ် မပြေ
နွမ်းစေယုံ ညဉ့်ယံ ထက်မှာ
မှေးစက် မပျော် မျက်ဝန်း ဆီ က
မယ့် ယဉ်မူ ပေါ်လာ ပြန်တော့
ဒီ ရင်မှာ မဖြေသိမ့် နိုင်တယ် …
စိတ်မခိုင် မျက်ရည်စို့ လို့........
တပြည် စီ ခြားနေပါလား …… မြတ်နိုးသူ …. ရယ် ….. ။
ကို ... တို့ ရဲ့ မှတ်တရ နေ့ လေးမှာ အလွမ်းတွေနဲ့ကုန်စေရပြန် ပြီ .... ကျန်းမာ ပျော်ရွှင်နေပါစေလို့ထပ်ထပ် ဆုတောင်းနေမိပါတယ် ... ချစ်သူ .... ။
အမှတ်တရ ..... ၂၂ . ၄ .၂၀၁၂ .... ။
Posted by မောင်ဘုန်း at 11:36 PM9comments
လန်းလို့ဖြင့် ရနံ့ ထုံ တယ်
ပိတောက် ငယ် ငုဝါ တွဲတော့
ဆေးပန်းချီ ငေးမှိုင် လေ …. ပေါ့
နှစ်ဆန်း ရယ် …. ။
သည်အခါ မင်္ဂလာ ထူးပြန် တော့
သဒ္ဒါတူ စိတ်ဝယ် စူး လေ .. ရော့
သူသူ ငါ မြူးလေ ပေါ့
ထူးတဲ့ ရာသီ …. ။
နှိုင်းမမှီ မင်္ဂလာ ထွန်း မှ
တီတီ ငယ် မင်္ဂလာ … ဆန်း လေ ပေါ့
ဖွားတော်ရာ မင်္ဂလာ ထွန်းတဲ့
ဆန်း ၂ ရက် အခါ
ထူးတဲ့ မင်္ဂလာ …. ။
လန်းလို့ဖြင့် စိတ်ဝယ် စု ကာ
နှောင်း အချိန် ရက်တွေပြောင်း တိုင်
စိတ်သဒ္ဒါ ရင်ထက် ခွေ လို့ 
ထူးတဲ့ မင်္ဂလာ ...
မွေးနေ့အချိန်ခါ ... ဖြစ်ပါစေ ... အန်တီ ...။
ယနေ့ကြရောက်သော အန်တီ တင့် ၏ မွေးနေ့ မင်္ဂလာ နေ့ ရက်မှ သည် နောင်နှစ်ပေါင်းများ စွာထိ စိတ် နှင့် ဆန္န ထပ်တူပြုကာ ပျော်ရွှင်စွာဖြင့် ကောင်းမှု့ကုသိုလ် ပြု နိုင်ပါစေ လို့ကျနော် မောင်ဘုန်း နှင့် ကောင်းကင်ဖြူ မှ ရိုသေစွာ ဆုတောင်း လိုက်ပါတယ် …. ။ အန်တီ …ရေ …. ။
Posted by မောင်ဘုန်း at 6:17 PM7comments
ဓာတ်ပုံကို ဒီနေရာ က ယူခဲ့ပါတယ် >>>> (http://moemaka.com)
မင်္ဂလာပါ ဗျာ ။ အားလုံးပဲ မင်္ဂလာ နှစ်သစ်လေး ဖြစ်ပါစေ လို့ကျနော် မောင်ဘုန်း နဲ့ ကောင်းကင်ဖြူ မှ ကျနော်ရဲ့ blogger မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများ ကို ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ် ... ။
ကျောင်းတက်စဉ် က ကျောင်းကပွဲ မှာ သံချပ် လေး ရေးမိရာ ကနေ အစပြု ပြီး ။ သင်္ကြန် ဆိုရင် ရက်ကွက်က လူတွေနဲ ပေါင်းပြီး သံချပ်တွေ ရေးခဲ့ပါတယ် .. ။ ကိုယ်တိုင်တော့ စင်ပေါ် တက်ပြီ မဆိုရဲ ပင်မဲ့ သင်္ကြန် ရောက်တိုင်း သံချပ် အဖွဲ့ဖြစ်မြောက် ရေးအတွက် ကြိုးစား ခဲ့ရတာ ဝါသနာ တစ်ခု လို ဖြစ်နေပါပြီ ။
ပြည်ပ ရောက်မှ သံချပ် မရေး ဖြစ်တာ ၄ နှစ်တိတိ ရှိသွားပါပြီ ... ။ ဒီနှစ် သင်္ကြန် မှာ အမိမြန်မာ ပြည်ကို လွမ်းရင်း အရင်က သင်္ကြန် ဆိုရင် သံချပ် ရေး ၊ သံချပ် တိုက်နဲ့သူငယ်ချင်း တစ်စုကို လွမ်း မိလို့ ဒီနေ့ညမှာ သံချပ်လေး တစ်ပုဒ်ရေးမိပါတယ် ... ။
ဦးနှောက် ကလည်း အသက်လေး ရလာလေ ... လေ ။ ချာလေ လေ ...ပါပဲ ။ ရှေ့ ကို ဆက်ရေးလိုက် နောက်ကို ပြန်ပြင်လိုက်နဲ့ဘယ်လို မှ စိတ်တိုင်းမကျ ပါဘူး ။ ဆက်ရေး ပြန်တော့လည်း ဘယ်လို့မှ ဆက်ရေးလို့မရတာနဲ့ကျနော် ရဲ့ မကောင်းမကန်း သံချပ်လေး ကို အမှတ်တရ အနေနဲ့တင်လိုက်ပါ တယ် ။
ဟေ …. မိုး … မိုး …မိုးလား … မောင် တို့…. ( အယ် …. ရေ …ရေ …. ရေဗျ … လောင်းစို့ )
သင်္ကြန် အခါ ရောက်လို့ လာ ……..... ( တို့ဗမာ့ ရိုးရာပွဲ ပဲ … )
သပြေခက်နဲ့ရေပတ်တာ ……… .... ( စာအုပ်ထဲ မှာ ရေးထား တာ လား)
တို့ ရဲ့ မဟာ ရိုးရာပွဲ ဟ ……… ........... ( မူးမှုး ရှုးရှုး တွေ့ တဲ့ အတိုင်းပဲ …. )
သင်္ကြန် မယ်တွေ အလှ ဆင် …........... ( ဒူး အပေါ် နှစ်မိုက် ... လည်ဟိုက် လို့ ဗျ )၂
ဟေ…… မိုး … မိုး …. မိုးလား … မောင်တို့…… ( အယ် …. ရေ … ရေ ….ရေဗျ …. လောင်းစို့)
သကြားမင်း ကြီး ဆင်းတယ်ဆို ……...... ( ခရီးပန်း လို့မာဆက် မှာ တဲ့ )
ကောင်းသူ ဆိုးသူ မ မှတ်ဘူး လား ….... ( ခွေးသရေ မလောက် ဘူး ဗျ )၂
ဟေ့…… ရွှေ …. လား …. (ဟေ့ …ငွေ …လား )
ရေဗှုးနဲ့ဖိနပ် မပါရင် ….............. ( နွေအခါ မှာ သိလိမ့်မယ် …. ဗျ )
နွေအခါမှာ သိလိမ့်မယ် ဗျ …........ (ရေဗူး နဲ့ဖိနပ်မပါ .. ရင် )
ဒါန နဲ့သီလ မပါရင် …........ .. (နောင်အခါ မှာ သိလိမ့်မယ် ဗျ )
နောင်ခါမှာ သိလိမ့်မယ် ဗျ ……... (ဒါန နဲ့သီလမပါ ရင် )
မီးစက်နဲ့ဖယောင်းတိုင် မပါရင် …..( ရန်ကုန် ရောက်ရင် သိလိမ့် ဗျ ) ၂
အယ် …… မိုး … မိုး …. မိုးလား … မောင်တို့…… ( အယ် …. ရေ … ရေ ….ရေဗျ …. လောင်းစို့)
တို့ တိုင်းပြည် ကြီး မဲမှောင် နေ …..... ( လျှပ်စစ် ဓာတ်တွေ ရောင်းစား မလို့…တဲ့ )
ဟို …. အရှေ့ က မဲမဲမှောင် ……....... ( ကျူပ်တို့ရန်ကုန် ရွှေမြို့ တော် ….. ဗျ )
မီဂါဝပ် တွေ ပိုတယ် ဆို …….......... ( သူ့ အိမ် တစ်အိမ် သာ ပြောတာဘာ ….. ဗျ … )
စီမံကိန်း ကြီးမရပ် ဘူး ဟ …........... ( ဒါမှ မလုပ် ဘာသွားစား မလဲ… )
စင်္ကာပူလို လုပ်မှာ … ကွ …............ ( နည်းနည်း တူတာ ရှိလာပြီ ….. )
ဘာများ တူသလဲ အမောင်တို့ရဲ့ …… ( KTV ၊ မာဆက် … ဝင်ငွေကောင်း သတဲ့ …. )၂
ဟေ …… မိုး … မိုး …. မိုးလား … မောင်တို့…… ( အယ် …. ရေ … ရေ ….ရေဗျ …. လောင်းစို့)
ကြား … ကြား သလား မောင် တို့…......... (သစ်ပင် အောက်မို့မရပါ )
မြန် … မြန် သလား မောင် တို့…........... ( ပတ်ကျိ ရူံးအောင် မြန်လိုက်တာ)
ကျော် …ကျော် ထား မောင် တို့…......... ( မတော်တရော် တွေပဲ ပိတ်တာ... ဗျ )
ဟိုင်းပါ … ဟိုင်းပါ … အမောင်တို့ .. ရဲ့ ……..... ( ဟိုင်းတယ် .. ဟိုင်းတယ် … ညီမ တို့ ရေ )
အကောင့် တစ်ခု add လို့ လာ …….......... ( ကောင်းမလေး ထင်လို့လုပ်မိတာ ….. ဗျ )
ကြည့်လည်း လုပ်ပါ အမောင် တို့ …. …… ( Q ….. တာ … ဆန်းသလား အဘ ….. ရယ် )
Mr …. ဆိုပြီ …… ညီမ ဖြစ်မလား ……........ ( အဲ့ဒါ မသိ …. Block … လိုက်ပြီ …. )
ဆွေ့ ဆွေ့ ခုန်ပေါ့ …. ကျနော် မှာ …… ........ ( online ဆိုတာ အဲ့ လိုပဲ …. ဟ …. )၂
ဟေ..............လာ...................မောင်....................ရို့ ..................... ဝါး
Posted by မောင်ဘုန်း at 9:27 AM5comments
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ ဗျာ … ။ စာမရေး ဖြစ်တာ တော်တော် ကြာသွားပါပြီ ။ တောက်တို မယ်ရ ကဗျာလေး တင်ပြီး blog လေးကို ပစ်ထားမိတာ အတော် ကို ကြာပါပြီ ။ ကျနော် ရဲ့ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း အိမ် တွေ ကို မရောက်ဖြစ်တဲ့ အတွက်လည်း တောင်းပန် ပါတယ် ။ ကျနော် အိမ်လေး ကို အသစ်ရောက်လာပြီ ခြေရာချန် သွားတဲ့ သူငယ်ချင်း တွေ ရဲ့ အိမ်ကိုလည်း မရောက်ဖြစ်တဲ့ အတွက် တောင်းပန်ပါတယ် ။
၂၀၁၂ ဟာ ကျနော် အတွက် တော့ ခရီးသွားနှစ်လို့ပြောရမလိုဖြစ်နေ လို့ ပါ ။ ည တိုင်းလိုင်းပေါ်ရောက်ဖြစ်ပင်မဲ့ facebook နဲ့သတင်းရပ်ဝန်း နေရာမှာ အချိန် ကုန် စေခဲ့ပါတယ် ။ ဟိုအလုပ်ရုံ မှာ နှစ်ပတ် ဒီအလုပ်ရုံ မှာ တစ်ပတ် နဲ့သွားရင်းပြန်ရင်း စာမရေး ဖြစ်လို့ ပါ ။
ကယ် …. ဒီနေ့တော့ အိမ်ပြန်ရောက်နေ့ ပေါ့ ။ စာရေးချင်တဲ့ စိတ်လေး ရှိပြန်တော့ ဘာရေးရမှန်း မသိတာနဲ့new post ဆိုပြီခေါင်းစဉ်လေး တက်ပြီ လက်တလော ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းရာ လေးပဲ ရေးပါတော့မယ် ။
၂၀၁၂ မှာ အာရှ ကားဈေကွက် မှာ လုပ်ငန်းသုံး တရုတ် ကားတွေ သိသိသာသာ ရောင်းအားကောင်းနေပါတယ် ။ ကျနော် တို့အလုပ်ရုံမှာ တင် နှစ်လ အတွင်း အစီး ၂၀၀ ကုန်သွားပါပြီ ။ ထိုင်း ၊ အင်တို ၊ ဗီယနမ် ၊ မြန်မာ တို့မှ လုပ်ငန်ရှင် သူဌေးများ ကျနော် တို့အလုပ်ကို ကိုယ်တိုင်လာကြည့်ပြီ ကားအတွက် လိုအပ်တဲ့ စစ်ဆေး မှု့ တွေ လုပ်ပြီ ၊ တချိုလည်း ကျနော်တို့ ဆင်ပြီ တဲ့ အတိုင်း သယ်သွားကြသလို တချို့ က ပြန်ဖြုတ် ပြီ သယ် ပါတယ် ။
လွန်ခဲ့ တစ်ပတ်လောက်က မြန်မာ သူဌေး နဲ့ တစ်ဖွဲ့အလုပ်ရုံ ကို လာကြပါတယ် ။ စုစုပေါင်း (၇) ယောက်လောက် ရှိမယ် ထင်ပါတယ် ။ ထူးဆန်း တာက အလုပ်ရုံထဲ လေ့လာရေး ခရီးထွက် သလို ကြည့်သွားပါတယ် ။ သူ့ တို့ယူမဲ့ ကားတွေကို တစ်ခြားနိုင်ငံ က သူဌေး တွေလို ကားစစ်ဆေးတဲ့ အဖွဲ့ပါမလာပါဘူး ။
ဂုဏ်ယူမိတာ ကတော့ တစ်ခြားနိုင်ငံက သူဌေးတွေလို စကားပြန် မပါပဲ အီး လိုရော တရုတ် လိုပါ ပြောနေတာ တွေ့ ရပါတယ် ။ ကျနော်တို့ဆိုက်တာဝန်ခံ က မြန်မာတွေ တော်တယ်တဲ့ ။ အီး လိုရော တရုတ်ပါပြောတက်တယ် တဲ့ ။
ဝမ်းနည်းမို့ကောင်းတာက တော့ မြန်မာ အချင်းချင်း တွေ့ တာ မြန်မာလို မပြောသွားပါဘူး ။ ထားပါလေ
ပြောချင်တာက အခု သူတို့ဝယ်သွားတဲ့ တရုတ်ကားအကြောင်းပါ ။ တရုတ်ကားတွေ အရည်သွေး အားနည်းတာတော့ လူတိုင်း သိပြီးသာပါ ။ လုပ်ငန်းသုံးအတွက် ဈေးနှုန်း အနေထား ကြောင့် လုပ်ငန်းရှင်တိုင်း စိတ်ဝင်စားကြပါတယ် ။ ဒီ ကားတွေကို ၂ လ အတွင်း အစီး ၂၀၀ အပြီး တပ်ဆင်မို့စုစုပေါင်း (၇) ဖွဲ့ခွဲထားပါတယ် ။ ၃ ဖွဲ့ က အင်ဂျင် အပိုင်း ပါ ။ နောက် ၃ ဖွဲ့ ကတော့ အတွင်းခန်း နဲ့ဝါယာ လိုင်း ။ နောက်ဆုံး တစ်ဖွဲ့ကတော့ QC စစ်ပါတယ် ။
QC စစ်တဲ့ နေရာပါ
ကျနော် က အတွင်းခန်း နဲ့ဝါယာ လိုင်း တပ်ဆင်တဲ့ ၃ ဖွဲ့ ထဲကမှ တစ်ဖွဲ့မှာ လုပ်ရပါတယ် ။ ကျနော် တို့ကားတစ်စီး ကို လုပ်ပြီး သွားရင် အောက်ပါ စာရွက်မှာ လက်မှတ် ထိုးရပါတယ် ။
ဒါကတော့ ဒီ တရုတ်ကား တွေ အဓိက အားနည်း တဲ့ အစိတ်ပိုင်းလို့ပြောရမှာပါ ။ ဥပမာ ဆိုပါတော့ ဗျာ ကျနော်တို့တပ်ဆင်လိုက်တဲ့ ပစ္စည်း ဟာ သူ့ မှုရင်းစက်ရုံ က ထုတ်လိုက်တဲ့ အားနည်း ချက် ကြောင့် သိမ့် အလုပ်လုပ် ဘူး ဆိုပါတော့ ။ ကျနော် တို့ က ဒီ အစိတ် ပိုင်း မကောင်းလို့ဆိုပြီး အဲ့ ကားကို ဆက်မလုပ်ပဲ ထားတာမဟုတ်ပါဘူ ။ လက်ပူ တိုက်ပေးလိုက်ပြီ QC အစစ် ခံ ပါတယ် ။
ကျနော် တို့ကားစီကို တပ်ဆင်ပြီးရင် QC pass ဖြစ်မှ တစ်စီး ပြီးတယ် လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ကျနော် တို့အတွက် QC pass ဖြစ်မို့ဆိုတာ အရေးကြီးပါတယ် ။ ကိုယ်တွေ လို တခြား အဖွဲ့ တွေလည်း ရှိတာကြောင့် တစ်ရက်ကို ကား ဘယ်နှစီးပြီးတယ် တယ် ဆိုတာ တစ်ဖွဲ့နဲ့ တစ်ဖွဲ့ အပြိုင်ဆိုင်လုပ်ရ တာကြောင့် ဘယ်လို လက်ပူ တိုက်ရင် QC pass ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ နည်းတွေ ကို အသုံးပြု ရတာပါ ။
လက်ပူတိုက် နည်း တွေ ကိုတော့ မရေးသင့် ဘူး ထင်လို့မရေး တော့ပါဘူး ။ ဒီလို ရေးတာ တင် တော်တော် များနေပါပြီ ။ အထက်ပါ ပြောခဲ့ တဲ့ (၇) ဖွဲ့ထဲမှာ QC အဖွဲ့ကလွဲလို့ကျန်တဲ့ အဖွဲ့ တွေမှာ မြန်မာ အလုပ်သမား အများစု ပါဝင်တာကြောင့် မြန်မာတွေ လုပ်ထားတဲ့ ဟာ ကို ၊ ကိုယ့် မြန်မာ တွေ ပဲ ခံရတယ် ဆိုတဲ့ အဖြစ်မျိုး မဖြစ်ရအောင်ပါ ။
နောက်ဆုံး ခံရမဲ့ လူက အခြေခံ အလုပ်သမားတွေ ထဲက ကားသမားတွေ ပေါ့ ။ သူဌေး ဆိုတဲ့ သူကတော့ သူဝယ်လာတဲ့ ကားကို လုပ်ငန်း သုံး ဖြစ်တာကြောင့် ကားသမား လက်ထဲ အပ်ပါတယ် ။ ကားသမား လက်ထဲလည်း ရောက် ရော တစ်လ နှစ်လ ပဲ သုံးရသေးတယ် ။ လက်ပူ တိုက်ထားတဲ့ အပိုင်းတွေက စပြီ ပျက်ရော ….. သူဌေး လုပ်သူက “ ငါဝယ် လာတာ အသစ်ကြီး ပါ ….. မင်း ဘယ်လို မောင်းတာလည်း ” ဆိုပြီး ဖြစ်မှာ မြင်ရောင်မိလို့အခုလောက်လေး ရေးမိတာပါ … ။
ကျနော် နှင့် မြန်မာ့ ဖုန်း
ဘယ်ကနေ စပြောရမှန် ကို မသိဘူး … ဒေါသ ဖြစ်တယ် ဗျာ … ။ ရေးမယ် ဆိုမှ ပို လို့ တောင် ဒေါသ ဖြစ်တယ် ။ ဖြစ်ပုံက ဒီလိုပါ ။ ကောင်းကင်ဖြူ က ဒီနှစ် မှာ ရွှေလီ ကိုပြောင်းပြီး အလုပ်လုပ်တာကြောင့် တရုတ်ဖုန်းလိုင်း သုံးပါတယ် ။ ကျနော် ဆီကနေ တရုတ်ဖုန်းကို ဆက်ရင် တော်တော် ဈေးသက်သာ သလို လိုင်းလည်းကောင်းပါတယ် ။
အခု ချစ်သူ က ရွာမှာ လက်ဖက်ခူးမို့လုပ်သမား ငှား မရလို့ကိုယ်တိုင် ခူးမယ် ဆိုပြီး ရွာပြန်မို့လုပ်တော့ ၊ ကျနော် လည်း မေးမိပါတယ် ။ ဘယ်လို ကြောင့် အလုပ်သမား မရလည်း ပေါ့ ။
အခုရာသီ ဟာ ဘိန်းစေးခြစ် အချိန် ဖြစ်တာကြောင့် ရွာမှာ ရှိတဲ့ အလုပ်သမားတွေ က ဘိန်းခင် တွေမှာ သွားလုပ်တာကြတာ အကုန်ပဲတဲ့ ။ တစ်ရက်ကို ၆၀၀၀ ကျပ် ရပါသတဲ့ ။ လက်ဖက်ခူး ရင်တော့ အရင် နှစ် တွေမှာ တစ်ရက် ၁၅၀၀ ကျပ် ပေးပင် မဲ့ ၊ ဒီနှစ်မှာ တော့ ၂၅၀၀ ကျပ် တောတောင် လုပ်မဲ့ သူမရှိဘူတဲ့ ။
ဒီထက်လည်း ပိုပေးလို့မရတော့ ဘူးတဲ့ ။ အရင်နှစ်တွေ အခုလို ရွှေဖီလက်ဖက် ခူးချိန် မှာ လက်ဖက်ဈေး တစ်ပိဿကို ၈၀၀ ကျပ်ရှိ ပင်မဲ့ ဒီနှစ်မှာ တော့ ၇၀၀ ကျပ် ပဲ ရှိတယ် တဲ့ ။
မြန်မာ ပြည်မှာ လည်း အဲ့လို တရုတ်တွေ က ဘိန်းစိုက်ပြီး စီးပွားရှာ နေတာ ကို တာဝန်ရှိ တဲ့သူတွေပဲ မသိတာလား ။ မသိချင်ဟန် ဆောင်ပြီ ဝေစားမျှစာ လုပ်နေတာ လား မသိ ။ ဟို တလောက အစ်မ ချော (အစိမ်းရောင် လွင်ပြင်) ဆိုရင် ကိုယ်တိုင် ဘိန်းခင်ထဲ သွားပြီ မှတ်တမ်း တင် ခဲ့သေးတယ် ။
ထားပါလေ …. ။ လိုရင်းမရောက်တော့ဘူး…. ။ အဲ့လို နဲ့ကောင်းကင်ဖြူ ရွာ ပြန်သွားရော ။ ဆက်သွယ် လို့ လွယ်အောင်ဆို ပြီး အခုပေါ် နှစ်သိန်းတန် ဖုန်းလိုင်းကို မှုဆယ် မှာ ဝယ် သွားပါတယ် ။ မေးကြည့်တော့ ရွာ မှာ သုံးလို့ ရတယ်တဲ့ လိုင်းမိ တယ်ဆိုပဲ … ။ အဆင်ပြေသာ လို့တွေးမိတာပေါ့ ။
ဒါနဲ့မနေ့ က ချစ်သူဆီ ဖုန်းခေါ်ပါတယ် ။ လူကြီးမင်းတဲ့ တွေ့ တာနဲ့…. ။ အိမ်ဖုန်း ကိုခေါ်တော့ ချစ်သူ အဖွားနဲ့ တွေ့ ရော ။ ခက်တာက အဖွားက မြန်မာ စကားကောင်းကောင်း မပြောတက်ဘူး ။ ချစ်သူ မှာ ထားပုံ ရတယ် ။ အဖွား က ကြိုးစားပြီ ပြောရှာ တယ် ။ နောက်ဆုံး ၁၀ မိနစ်လောက် အဖွားပြောတဲ့ မြန်မာ စကားကို မြန်မာလို ဘာသာပြန်ကြည့်တော့ “ တစ်အိမ်လုံး လက်ဖက်ခင်း သွား” ဆိုတာပဲ ကျနော် နားလည် လိုက်ပါတယ် ။ ၃၀ RM ထည့်ထားတဲ့ ကျနော် ဖုန်း က ၁၂ RM ပဲ ကျန် တော့တယ် ဆိုတဲ့ massage ရောက်လာ ပါတယ် ။ ဒါနဲ့ ည ရောက်တော့ နောက်ထပ် ၃၀ RM တန် ကတ် ထည့်ပြီ ချစ်သူ ဖုန်း ကို ခေါ်ကြည့်တော့ လူကြီးမင်း ပဲ ဖြစ်နေပြန်ရော ၊ အိမ်ဖုန်း ကို ခေါ်တော့ လည်း …. တူ ………… ဆိုပြီး သုံးခါ အသံ ကြားရပြီး ပိုက်ဆံသာ ကုန်သွားတယ် ခေါ်လို့ မရ ။
သြော် … တစ်နေ့ ကုန် လက်ဖက်ခူး ကြတော့ ပင်ပန်းလို့စောစော အိပ့် ပြီ လို့ထင်တာနဲ့ ဆက်မခေါ် ပဲ ဖုန်းထဲ က ပိုက်ဆံ ကို ကြည့်လိုက်တော့ မနက်က ကျန်တဲ့ ၁၂ RM ရယ် ၊ ထပ်ထည့်တဲ့ ၃၀ RM ရယ် စုစုပေါင်း ၄၂ ရှိရာ က ၃၀ RM ကျန် တော့တယ် … ။ မြန်မာပြည်ခေါ် ရင် ဖြစ်နေကြပဲ လေ ..... ။ တခြာ နိုင်ငံ တွေလည်း ဒီလိုပဲ လားတော့ မသိ ဘူး ။
ဒါနဲ့ဒီနေ့နေ့ လည် ထမင်းစား နားတော့ ချစ်သူ ဆီ ဖုန်း ထပ်ခေါ် ပါတယ် ။ ခေါ်ခေါ်ချင် ပဲ …. တူ ……….တဲ့ ဘယ်လို ပျော်သွားမှန် မသိ … ။ ဒါမင်မဲ့ ထုံစံ အတိုင်းပဲ …. သုံးကာ …. တူ ….. ပြီရင် ပိုက်ဆံ ကုန် သွားတယ် ။ ဒီလို နဲ့၎ ခါလောက် ထပ်ခေါ်တော့
မောင်ဘုန်း ။ ဟဲလို …. ချစ်သူ …. ကြားရလား …. !!!!!!!!
ကောင်းကင်ဖြူ ။ အင်း …. ကို …. ကြားရတယ် ….
မောင်ဘုန်း ။ ချစ်သူ …. ဖုန်းခေါ်နေတာ မနေ့ ကတည်း က … ခေါ်လို့မရဘူး … အိမ် ဖုန်း ကိုခေါ်တော့လည်း အဖွား နဲ့ပြောရအဆင်မပြေဘူးရော … ချစ်သူ ဖုန်း က မနေ့ ကပိတ်ထားတာလား …. ညက အိမ်ဖုန်း ခေါ်တော့လည်း မကိုင်ဘူးရော …. အစောကြီး အိပ့်ကြလို့ လား ဟင် ….. ။
ကောင်းကင်ဖြူ ။ မဟုတ်ဘူး …. ကို ….. အိမ်က ဖုန်းက လိုင်းပျက်နေတာ မနေ့ က မနက် လောက်ကတည်းက … ။ ဝယ်လာတဲ့ ဖုန်းလိုင်း အသစ်ကလည်း လိုင်းမိချင်တဲ့ အချိန်မှ မိတယ် ။
မောင်ဘုန်း ။ အား ….. ဖြစ်ရမယ် ….. ချစ်သူ .. အဆင်ရော ပြေရဲ့လား ။ ဒါနဲ့ဘာသံတွေ လည်းကွာလေတိုက်သံ တွေ ကြားနေရသလို ပဲ …. ။
ကောင်းကင်ဖြူ ။ ဟုတ်တယ် …. ကို …အခု လက်ဖက်ပင်ပေါ်မှာ …. ။
မောင်ဘုန်း ။ ဘာ ……….!!!!!!!!! ... ။ သစ်ပင်ပေါ်မှာ …… ဘာတက်လုပ်နေတာလည်း …… တော်တော် မြင့်လား ချစ်သူ ပြုတ်ကျနေအုံးမယ် .... ချစ်သူရယ် ….. ။
ကောင်းကင်ဖြူ ။ ခုဏ က …. ကို …. ဖုန်းခေါ် တော့ အောက်မှာ လေ ။ ဖုန်း ကိုင်တော့ ဘာသံမှ မကြားရဘူး …… ။ ဒီက အစ်မ တစ်ယောက်က သစ်ပင်ပေါ် တက်ပြောရင် လိုင်း ရတယ်ဆိုလို့တက်လာတာ… ။
မောင်ဘုန်း ။ အားးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး !!!!! .. ။ ချစ်သူ ရယ် … ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ တော်တော် မြင့် လားရော ….. လက်ဖက်ပင် က လူတက်လို့ရအောင် ကြီးလို့ လား … ကို …. ဓာတ်ပုံတွေ ထဲမှာ မြင်ဘူးတာတော့ သေးသေး လေးတွေလေ ….. ။
ကောင်းကင်ဖြူ ။ အင်း ….. ဒီအပင်တွေ က …. နည်းနည်း တော့ မြင့် တယ် … ။ အဖိုးတို့ငယ်ငယ်လေး ကတည်းက စိုက်ထားတာ လေ ။ ကို ….. ခဏခဏ ပြောမှ အောက်ကို ကြည့်မိတယ် ပြန်ဆင်း ရင် ဘယ်လို ဆင်းရမှန်းတောင် မသိတော့ ဘူး ….. ။
မောင်ဘုန်း ။ အယ် …. ချစ်သူ …. ရယ် …. အောက်မှာ လူတွေ ရှိလား …. တစ်ယောက်ယောက် ကိုခေါ်ပြီ သေချာပြန်ဆင်း ..… နော် …. ။
ဟ …… ဟဲလို …. ဟဲလို …… ချစ်သူ ….ချစ်သူ ….. ။
အားရာ ….. ဖုန်းကလည်း ကျ သွားပြန်ပြီ …. ။
လူကြီးမင်း … ###### ….. ဆက်သွယ်မှု့ ပြင်ပ …..!!!!
လူကြီးမင်း …. ##### ……. စက်ပိတ် …. !!!!!
လူကြီးမင်း ... ##### ……. မအား ….. !!!!!
လူကြီးမင်း … ##### …. ဖွတ် … !!!!!
လူကြီးမင်း … ##### … သောက် …. ဖွတ်မြန်မာ့ … ဖုန်း …. !!!!!
ဘယ်လိုမှ ဆက်ခေါ်လို့ မရတော့ပါ … ။ ထမင်စားနားပြီး အလုပ်ပြန်ဆင်းတော့ အလုပ်ထဲမှာ လုံးဝ စိတ်မပါ ။ ချစ်သူ သစ်ပင်ပေါ်ကနေ အဆင်ပြေပြေ ဆင်နိုင်ရဲ့လား လို့စိတ်ပူမိပါတယ် ။
ဒီနေ့အလုပ်စောစော သိမ်းပြီး ချစ်သူ အိမ် ကို ဖုန်းခေါ် တော့ ကံကောင်းထောက်မ စွာ ချစ်သူနဲ့ကောင်းကောင်း ဖုန်း ပြောခွင့်ရမှ စိတ်အေးမိပါတော့ တယ် … ။
Posted by မောင်ဘုန်း at 8:12 AM7comments